Sida loo dhoofiyo iCloud Xiriirada in CSV File | Dhoofinta iPhone Xiriir
Waxaan jeclaan lahaa in ay keenaan dhammaan xogta aan iPhone xiriir in hal warqadda Excel. Ma jiraa hab inay u dhoofiyaan xogta si XLS ah ama qaab CSV a (aan kala files CSV xiriir kasta)? Waxaan leeyahay xiriir ah in aan iPhone iyo iCloud labadaba, laakiin iCloud u ogolaanaya in ay dhoofiyaan sida xiriirada vCard ah oo kaliya. iPhone 4s, macruufka 5.1.1.
Sure, halkan waa hab lagu soo baxay. Si aad u dhoofiyaan iCloud xiriir si CSV, kaliya aad u baahan software this - Wondershare TunesGo . Waxa aad siisaa awood ay uga dhoofin oo dhan ama soo xulay xiriirada badbaadiyey on xusuustaada iPhone ee, iCloud, Yahoo !, Exchange iyo xisaab oo dheeraad ah si file CSV ah. Markaas, aad ka furan kartaa file CSV ee isbiriidhshiit Microsoft Excel u habaynta ama daabacaadda. Hadda, download software iyo waxay leeyihiin isku day ah.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo taageerada dhoofinta iCloud xiriirada tusay iPhone, iPod, iPad macruufka orodka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 iyo macruufka 5 ilaa file CSV ah. Halkan, waxaad ka heli info dheeraad ah oo ku saabsan taageeray iPod, iPhone iyo iPad.
Sida loo dhoofin xiriirada ka iCloud in file CSV
First of dhan, rakibi ka dibna software this on your computer ordi. Markaas, furmo suuqa hoose timaado in aad indhaha ku hayaan.
Tallaabada 1. Ka iPhone / iPod / iPad la xiriira computer ah
Isticmaal cable USB ah in la sameeyo xiriir ka dhexeeya iPhone / iPod / iPad. TunesGo si deg deg ah waxaa lagu ogaan doonaa, oo waxaan ku tusi ay alaabtiisu column bidix ee suuqa hoose.
Tallaabada 2. dhoofinta iCloud xiriirada si file CSV
Hubi in aad gasho koontadaada iCloud ku saabsan iPhone ama aan. Haddii aan, fadlan ka jaftaa "Settings"> "iCloud" aad iPhone, iyo gasho account iCloud ah.
Markaas, khaanadda bidix ee suuqa hoose, kooxda xiriir iCloud muujinaysaa ilaa jirta qeybta Contact ah. Riix kooxda in ay tusi doono oo dhan xiriirada ee iCloud on xaq. Xulo doortaan xiriirada aad doonayay ama ay doortaan oo dhan. Guji "Import / Dhoofinta". In dhibic ka hoos menu, guji "dhoofinta Dhammaan Xiriirada" ama "Dhoofinta Xiriirada soo xulay".
Markaas, aad u heshid liiska kale hoos-hoos aad dhoofin karo xiriirada iCloud. Waxay yihiin "in A vCard File Single", "si ay u Multiple vCard File", "si ay u CSV File", "si ay u Outlook Express", "si ay u Windows Live Mail", "si ay u Windows Cinwaanka Book" iyo "in Outlook 2003/2007 / 2010/2013 ". Dooro "si CSV File". In file suuqa kala pop-up browser, doorato meel si loo badbaadiyo file CSV ah. Inta lagu jiro kala iibsiga, hubi iPhone, iPad iPod ama ku xiran waqtiga oo dhan.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta dhoofinta xiriirada ka iCloud in CSV, in aad awood u maareeyo xiriirrada iCloud, sida tafatirka, biirtay iyo takhalusid tahay. Markaas, doortaan xiriirada aad la doonayo inay u dhoofiyaan. Si kastaba ha ahaatee, wax walba oo aad u leeyihiin saamayn ma ku iCloud xiriirada asalka badbaadiyey on server network.
Daawo Video ah si dhoofinta iCloud Xiriirada in CSV File
Isku day TunesGo inay u dhoofiyaan xiriirada iCloud in file CSV ah!
> Resource > iCloud > Sida loo dhoofiyo iCloud Xiriirada in CSV File